Tsy Resaka Fikarakarana Biby ny Boky ‘Animal Farm’ [Toeram-Piompiana] na Ny Fihomehezana Naterak’Izany · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, русский, Español, македонски, English
Sary namboarina tao amin'ny Flickr-n'i Shilpa Shetty, avy amin'i Celebrityabc. CC BY 2.0
Mety mahita ny tenirohy #ShilpaShettyReviews amin'ny sioka maro avy amin'ny Indiana ianao androany. Mikasika ny hadalana nataon'ilay mpilalao sarimihetsika Bollywood, Shilpa Shetty tamin'ny antsafa, izay nalaza vetivety izany.
Nanomboka andro vitsivitsy izay no lasa nalaza tao amin'ny Twitter ny tenirohy raha navoaka tao Lucknow nandritra ny fihaonambe isan-taona faha-59 fanaon'ny Fikambanan'ny Sekoly Indiana mpizara Sertifikà ny fandaharam-pianarana vaovao hanaovana Fanadinana hahazoana Sertifikàn-tsekoly Indiana. Nambara tao amin'ny fihaonambe fa ny fandaharam-pianarana ho an'ny mpianatra Kilasy faha-3 ka hatramin'ny kilasy faha-8 dia ahitana tantara an-tsary «Astérix sy Tintin», ny tantara mitohy “Harry Potter” an'i JK Rowling, ny tantara mitohy “Hercule Poirot” an'i Agatha Christie, “The Hobbit” an'i JRR Tolkien, “Feluda” an'i Satyajit Ray ary ny “Sherlock Holmes” tantarain'ny Sir Arthur Conan Doyle, ankoatra ireo boky hafa. Ho Tafiditra ao anatin'ny lisitry ny vakiteny ihany koa ny tantaram-piainan'i APJ Abdul Kalam, Anne Frank ary Malala Yousafzai.
Tamin'ny antsafa tao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro Times of India amin'ny teny Anglisy, nanohana tamin'ny fo ny fanapahan-kevitra i Shilpa Shetty ilay mpilalao sarimihetsika Bollywood, ary nilaza hoe:
Fanapahan-kevitra tsara ny fampidirana ny boky tahaka ny Seigneur Des Anneaux [Tompolahin'ny Peratra] sy Harry Potter ao anatin'ny fandaharam-pianarana satria mamboly fandinihana sy fahaiza-mamoronana dieny mbola kely. Tokony ahitana boky tahaka ny Little Women (Vehivavy Kely) ihany koa, satria mandrisika ny fanajana ny vehivavy tanora izany. Na dia ny boky toy ny Animal Farm (Toeram-Piompiana) aza dia afa-mampianatra ny ankizy hitia sy hikarakara biby.
Miharihary fa diso fandraisana ny Animal Farm, izay fanehoan-kevitra ara-politika ara-panoharana momba ny Firaisana Sovietika avy amin'i George Orwell tao amin'ny fiarahamonina mahantra, izy raha nieritreritra izany ho zavatra tsara ho an'ny biby.
Izany no mahatonga ny #shilpashettyreviews (fandinihan'i shilpashetty) ho lasa malaza.
Feno momba ny fandinihana fohy haingana tahaka ity manaraka ity ny aterineto, mitondra ny tenirohy #ShilpaShettyReviews avokoa izy rehetra, izay lasa lohahevitra voalohany malaza vetivety
Boky torolalana ho an'ny mpanonta dot matrix ny Fifty shades of Grey (Ny Zavatra tsy Mazava)
Oh! nieritreritra aho hoe momba ilay tovolahy miasa ao amin'ny saha itsirian'ny varahina ilay hoe David Copperfield [kilalaonteny mampiditra ny field=saha sy copper=varahina izany]
[Rehareha sy Fitongilanan-kevitra] no boky ankafiziko momba ny vondrona liona sy fanavakavaham-bolonkoditra.
Tokony hovakian'ny ankizy ny ‘Anganon'ny Tanàna Roa’, mba ahafahan-dry zareo mianatra jeografia.
Boky mahatalanjona momba ny fahandroan-tsakafo ny [Fiainan'ny pi iray]. Hotiavin'ny ankizy io.
Tokony hamaky ny [Papangohazo] ny ankizy, satria izay ihany no ahafantarana ny maha- mampidi-doza ny fihazana papango.
Ny fahadisoana ao amin'ny kintantsika no boky tsara indrindra ho an'ny ankizy hianarana astronomia.
Tsara ny Hobbit [Tapak'Olona]. Tokony hampivelatra ny “hobbit” tsara ny ankizy rehetra
Ary nankafy kokoa amin'ny famakiana ireo sioka vaovao ny olona:
Misy olon-kafa tsy mitsahatra mamaky ny #ShilpaShettyReviews rehetra ve?
Mampihomehy avokoa izay zavatra ataon'ny olona ao!
Nisy ihany koa ireo sioka nanohana an'i Shetty:
nahoana no manome tsiny ny lahatsoratra novokarin'ireo tonian-dahatsoratra marobe raha afaka mihomehy amin'ny vehivavy mety ho tsy nilaza ilay zavatra ianao?
Ry namana @TheShilpaShetty, mino ve ianao fa nanatsonga tokoa ny zavatra nolazainao araka ny tokony ho izy ireo? Satria misy tsy resaka fikarakarana biby ny boky #AnimalFarm [Toeram-Piompiana]
Ary nisaotra an'i Shilpa Shetty i Sabit Aziz:
Misaotra anao Shilpa Shetty noho ny Hadalana. Vonona ankehitriny ny lisitry ny bokiko [en]